Global Voices teny Malagasy » Pakistàna: Fifidianana sy Fanisàna · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 27 Marsa 2018 3:02 GMT 1	 · Mpanoratra Neha Viswanathan Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Azia Atsimo, Pakistana, Fifidianana, Mediam-bahoaka, Politika
Raha mivoaka hifidy ireo vahoaka ao Pakistàna androany (18/02/08), miresaka momba ny fifidianana kosa ny tontolon'ny bilaogy. Manaraka ny fifidianana ny All Things Pakistan , ary manainga ireo mpamaky azy mba hizara ny fitantarana avy any amin-dry zareo.
Hazavain'ny Crow's Nest  ny antony maha-zavatra tsy misy ilàna azy ny fifidianana, indrindra raha tsy misy ifandraisany loatra amin'ny dingana demaokratika izay ho vokatry ny fifidianana eo. Na tsy nisy hosoka aza ny fifidianana, ny dindon'ireo sasantsasany mpanao politika dia midika fa zara raha hisy toerana ho an'ny tena fanovàna.
Etsy ankilany, ao amin'ny KO , toa maniry ny handeha hifidy ilay mpanoratra, saingy tsy afaka noho ny lisi-pifidianana tsizarizary sy ratsy tantana izay nanilika ireo mpifidy voasoratra anarana, ary ny tsy fanomezana toerana ny famahàna ny olana momba ireo anarana tsy tafiditra.
Shahab ao amin'ny Metroblogging Islamabad  toa nientanentana ery momba ny nahafahany nifidy, ary milaza fa betsaka ireo olona niverin-dàlana nefa tokony hifidy, tamin'ny filazàna hoe mpisoloky daholo ireo mpanao politika. Manaraka akaiky ny vokatry ny fifidianana isam-paritra ny Parliament Watch . Mitondra fanavaozana tsy tapaka momba ny vokatry ny dingana arahana amin'ny fifidianana kosa ny The Pakistani Spectator .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/03/27/116801/